Herisetra Ao Avaratra Andrefan’i Myanmar Niteraka Adim-baovao Antserasera Ahitana Fanehoan-kevitra Mankahala Ny Rohingya Sy Sary Hosoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2017 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Português, Italiano, English
Ohatra iray amin'ny fanehoan-kevitra mankahala ny Rohingya izay mampiseho ny Bodista ao Myanmar, voampanga ho nanao fanadiovana ara-poko ny vahoaka Rohingya. Pikantsary avy amin'ny Twitter, 4 Septambra.
Feno fanehoan-kevitra feno fankahalana, sary hosoka, ary fitantaram-baovao manavakava-bolonkoditra ny aterineto tao Myanmar taorian'ny fifandonan'ny tafika Myanmar tamin'ny Tafi-panavotana Arakan Rohingya (ARSA) tamin'ny 25 aogositra 2017, tao akaikin'ny sisintanin'i Bangladesh ao amin'ny faritra avaratra andrefan'ny firenena.
Naharitra andro maromaro ny herisetra ka nanambara avy hatrany ny governemantan'i Myanmar fa vondrona mpampihorohoro ny ARSA no sady nanomboka hetsika fanadiovana feno herisetra tao amin'ireo tanàna ao amin'ny fanjakana Rakhine. Nifanome tsiny noho ireo sivily maty vokatry ny fifandonana ny governemanta sy ny ARSA.
Satria mbola mitohy ny herisetra, niezaka namindra toerana ireo foko tsy miozolomana tao amin'ny faritra ny governemanta Myanmar, saingy navela kosa ireo sivily Rohingya, izay misy iray tapitrisa eo ho eo. Noho izany, mpitsoa-ponenana Miozolomana Rohingya an'arivony no namakivaky ny sisintanin’i Bangladesh mba handositra ny ady.
Na dia nisy fiantraikany tamin'ireo vondrona ara-poko marobe aza ny ady, nanasongadina ny ataon'ny governemantan'i Myanmar amin'ireo vahoaka Rohingya tsy mpitolona mandositra ny herisetra ny media iraisampirenena , ary maro ireo tatitra momba ny habibiana nataon'ny miaramila tamin'ny Rohingya. Mandritra izany fotoana izany, nanasongadina ny fahafatesan'ireo olona avy amin'ny vondrona ara-poko hafa monina ao amin'ny faritra, voalaza fa noho ny fanafihan'ny ARSA ny fampahalalam-baovao ao an-toerana.
Nandrisika ny governemantan'i Myanmar mba hanatsahatra ny herisetra sy handray andraikitra hanampy ireo mpitsoa-ponenana ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Na izany aza, nitsikera ny fampahalalam-baovao iraisampirenena ny sasany tao Myanmar, miantso azy ireo fa mitanila noho ny ‘tsy firaharahiana’ ny manjò ny mponina Bodista ao an-toerana izay voafindra toerana ihany koa noho ny fifandonana eo amin'ny governemanta sy ny ARSA.
Fanafihana ireo fitantarana iraisam-pirenena
Na dia nameno ny sehatra antserasera ao Myanmar nandritra ny taona vitsivitsy aza ny famoahana fampielezan-kevitra feno fankahalana sy vaovao faikany, nanjary nihamafy be izany taorian'ny 25 Aogositra. Niteraka “adim-baovao” amin'ny aterineto ireo fifandonana ireo, izay ahitana fampielezan-kevitra marobe manesoeso mikasa hanitsy ny fitantarana iraisampirenena manjaka momba ny fifandonana .
Ny tena manjaka amin'ireo sary ireo dia fanaratsiana ny toetoetry y Rohingya ho Bengalis. Mampiantrano vondrona ara-poko vitsy an'isa marobe tahaka ny Rakhine, Mro, Rohingya ary Dai-net ny fanjakan'i Rakhine. Tsy tahaka ireo vondrona hafa, tsy mankasitraka ny Rohingya (izay Silamo ny ankamaroany) ho vondrom-poko ny governemantan'i Myanmar. Fa antsoiny kosa ho “Bengali” izy ireo.
Fanehoana miely be mampitaha ny “fomba fijery manerantany” na ny fomba fijery iraisampirenena momba ny fifandonana miaraka amin'ny “zava-misy”. Pikantsary avy amin'ny Twitter, 4 Septambra.
Iray amin'ireo vondrom-poko lehibe indrindra any Azia Atsimo ny Bengalis. Saingy ao Myanmar, manana ny dikany manokana ny Bengali. Lasa teny manevateva ilazana ny Rohingya ho mpifindra monina tsy ofisialy avy any Bangladesh izany (Bengalis). Nanjary lasa fanalam-baraka fanavaham-bolokoditra matetika atao amin'ireo Rohingya any Myanmar, anaty aterineto sy ivelan'ny aterineto ity famaritana ity miaraka amin'ny teny fanevatevana hoe ‘kalar‘.
Sary hafa kosa mamaritra ireo trano fampahalalam-baovao iraisampirenena ho mifantoka amin'ny manjò ny Rohingya.
Sary niparitaka be momba ny fifandirana misy amin'izao fotoana izao ao Myanmar, izay milaza fa tsy miraharaha ny fahafatesan'ireo tsy Rohingya vitsy an'isa ao Rakhine ny media iraisampirenena. Pikantsary avy amin'ny Twitter, 4 Septambra.
Ny sary etsy ambany kosa dia milaza fa nanampy ireo loharanom-baovao iraisampirenena mba hanaparitaka vaovao diso momba ny toe-draharaha ny Rohingya:
Sary fanehoan-kevitra feno fankahalana niparitaka be momba ny fifandirana misy amin'izao fotoana izao any Myanmar, mampiseho Rohingya ho manana fifehezana be loatra amin'ny media iraisampirenena. Pikantsary avy amin'ny Twitter, 4 Septambra.
Nalaza tamin'ny tambajotra sosialy tao Myanmar ireo sary tahaka ny etsy ambony sy ireo endrika hafa mampiseho ireo hevitra ireo.
Fampielezan-kevitra fanevatevana antserasera voarindra
Ankoatra ny fizarana mazava tsara sy ny famerenana ny famoahana ireo sary ireo, nahamarika fironana amin'ny fizarana izay hita fa toa voarindra ny mpanara-baovao sasany.
Nahita firaisana tsikombakomba hafahafa tamin'ny kaonty Twitter vaovao miisa 1.500 miaraka amin'ny tenirohy mihantsy izay nipoitra taorian'ny fifandonana tamin'ny 25 Aogositra ilay mpanadihady tsy miankina Raymond Serrato. Maro tamin'ireo kaonty mampiahiahy no nanaparitaka hafatra mpomba ny governemanta izay mampiseho tenirohy toy ny #Bengali na #BengaliMpampihorohoro ihany koa. Tsy fantatra hoe iza no ao ambadik'ireo kaonty ireo, saingy manaparitaka tranga mitovy amin'ny “brigady Twitter” ao amin'ny firenena samihafa ny fironana, anisan'izany i India sy Emirà Arabo Mitambatra.
Tamin'ny tranga hafa, nandrisika ny mpiserasera ny fanentanana iray tao amin'ny Facebook mba hanome fanehoan-kevitra ratsy ho an'ny pejy ny BBC Burmese Service sy ny Voice of America (VOA) Myanmar miaraka amin'ny kintana iray ho an'ny tatitra momba ny Rohingya, sady mandrisika ny mpiserasera mba hanome kintana dimy ho an'ny pejy Facebook-n'ny mpanolo-tsainan'ny fanjakana any Myanmar. Milaza ny fanamarinana pejy mitovy avy amin'ny kaonty tokana (jereo ny ohatra etsy ambany) fa ezaka narindra mba hanaratsiana ireo fampahalalam-baovao izany.
Fijerena indray ny pejy Facebook-n'ny BBC Myanmar. Pikantsary avy amin'ny mpanoratra tamin'ny 25 Aogositra.
Hevitra ao amin'ny pejy VOA. Pikantsary avy amin'ny mpanoratra, 4 Septambra.
Nihitatra tamin'ny fijirihana (hacking) ny fanentanana fanevatevana antserasera voarindra. Nitatitra ihany koa ny gazety ao an-toerana fa tranonkala maromaro an'ny governemanta Myanmar no voajirika tamin'ny herinandro lasa teo, voalaza fa valifaty ho an'ny fitondran'ny governemanta amin'ny ataony amin'ny mpitsoa-ponenana Rohingya.
Sary diso sy diso adiresy
Sarotra ny mahazo vaovao marina momba ny fifandonana, satria sahirana amin'ny fahazoana miditra ao amin'ny faritry ny fifandonana ny mpanao gazety avy ao amin'ny faritra sy avy any ivelany. Namela vaovao sy sary tsy voamarina mikasika ny fifandonana izany, izay matetika feno sary namboarina na avy any amin'ireo firenen-kafa. Nampiasain'ny andaniny roa mba hampandrosoana ny fampielezan-keviny ny sary tahaka izany.
Ireto ambany ireto ohatra roa momba ny fanehoan-kevitra fankahalana mamely ny Rohingya (jereo tsara ny tenirohy):
Ohatra iray amin'ny fanehoan-kevitra feno fankahalana manohitra ny Rohingya. Pikantsary nalaina tamin'ny 4 Septambra.
Ireto ohatra sasany tamin'ireo sary mpomba ny Rohingya izay voaporofo taty aoriana fa avy ao Nepal sy Indonezia:
Ohatra iray amin'ny lahatsoratra vaovao hosoka miaraka amin'ny sary efa nampiasaina. Ny sary eo amin'ny ilany havia dia hita ao amin'ny tranonkala iray mitatitra ny tondra-drano tao Nepal tamin'ny 13 Aogositra. Ny sary havia ambony sy ambany dia mila hamarinana satria niseho tao amin'ny Twitter taorian'ny herisetra izany. Ny sary ambany ankavanana dia avy any Banda Aceh, Indonezia. Pikantsary tao amin'ny Twitter, 4 Septambra.
Nanangana pejy Facebook ofisialy, fantatra amin'ny anarana hoe “Komitin'ny Fampahalalam-baovao” ny governemantan'i Myanmar, pejy Facebook ofisialy hiasa toy ny sehatra manome vaovao azo antoka momba ny toe-draharaha ao Rakhine, saingy manoloana ny toe-javatra, tsy maintsy jerena tsara ny tena fahamarinan'ny vaovao.
Miaraka amin'ny fampielezan-kevitra mifandona sy ireo vaovao faikany mameno ny aterineto sy ny fahafahana voafetra miditra any amin'ny faritra misy fifandonana, mbola sarotra ny manamarina ny toetoetry ny tany aorian'ny ady.
Nosoratan'ny “vahiny mpandray anjara” tsy te hotononina anarana noho ny antony ara-piarovana ity lahatsoratra ity.
Azia Atsinanana3 ora izay